Manchester United oo go’aamisay heshiiska Aaron Wan-Bissaka iyo xilliga uu tijaabada caafimaadka u mari doono oo la shaaciyay – Gool FM
Manchester United oo go’aamisay heshiiska Aaron Wan-Bissaka iyo xilliga uu tijaabada caafimaadka u mari doono oo la shaaciyay
Dajiye June 25, 2019
(England) 25 Juunyo 2019. Wargeyska “The Sun” ayaa xaqiijiyay in Manchester United ay kala heshiisay kooxda Crystal Palace saxiixa Aaron Wan-Bissaka, taasoo ka dhigeysa inay dhameystirto heshiiskeedii labaad ee suuqan xagaaga.
Manchester United ayaa dhameystirtay bilawga suuqan xagaaga heshiiska 21 jirka reer Weles ee Daniel James, wuxuuna kaga soo dhaqaaqay Swansea City aduun dhan 15.30 milyan ginni.
Wargeyska “The Sun” ayaa tilmaamay in kooxda Manchester United ay dhameystirtay heshiiska Aaron Wan-Bissaka, waxaana ciyaaryahanka reer England uu tijaabada caafimaadka u mari doonaa Isbuucaan, kahor inta aan si rsmi ah loogu dhawaaqin heshiiska.
Shabakada “Sky Sports” ayaa shalay oo isniin ah tilmaamtay in kooxda reer London ee Crystal Palace ay codsatay qiimo gaaraya 50 milyan ginni si ay ugu ogolaato inuu ka tago xiddigeeda Aaron Wan-Bissaka.
Laakiin waxay u muuqataa in Manchester United ay heshiis kama dambeys ah la gaartay kooxda Crystal Palace si ay ula saxiixato Aaron Wan-Bissaka suuqan xagaaga, waxaana ay bixin doontaa lacagta ay codsadeen kooxda ka dhisan magaalada London.
“Messi ayaa sabab u ah in Barcelona aysan ku guuleysan Champions League” - Louis van Gaal
Sadio Mane oo koobka Champions League ku badalan lahaa koobka qaramada qaaradda Africa.